Ibhunga lezokhuseleko leZizwe eziManyeneyo - Wikipedia
File:Ibhunga lezokhuseleko leZizwe eziManyeneyo ngo-2005.jpg
Ibhunga loKhuseleko leZizwe eziManyeneyo (UNSC) liyinxalenye yamalungu amathandathu aphezulu kuMazwe aManyeneyo. Ibhunga lokhuseleko lijongene nokugcina ucwangco okanye uxolo kunye nokhuseleko phakathi kwezizwe.
3 Naku okunye okungafundwa
4 Ezinye ii-website
Ali-15 amalungu e-UNSC kodwa mahlanu kuphela amalungu asisigxina. Nanga:
Izihlalo ezilishumi zikho okwethutyana kwaye zigcinwe iminyaka emibini kunye nezizwe (amazwe)ezingaamalungu nezivotelwe ukuba zingene embuthweni ngokweengingqi zeNgqungquthela yezizwe ezimanyeneyo. Ubongameli bebhunga lokhuseleko (i.e. iinkokheli) bujikeleza ngokoonobumba bokuqala bezizwe kwinyanga nganye. ukususela ngo-2014, amalungu ethutyana ali-10 ngala:
Ukuba ilizwe liye labonaka liziphethe kakubi, I-UNSC ingawisa isigwebo, esibizwa ngokuba sisisombululo okanye lukwayo libhunga lezokhuselo lwezizwe ezimanyeneyo. Umzekelo ngowokokuba i-UNSC ikubhangisile kungoku nje ukuthunyelwa kwempahla eyinuclear e-Iran njengoko bebona okokuba i-Iran izakwenza izixhobo zokulwa ze-nuclear. Kodwa nangona kunjalo, i-Jamani sele ilumene iindlebe ngalo mba namalungu ebhunga lezokhuseko olusisigxina lwezizwe ezimanyeneyo. Ibhunga lezokhuselo lezizwe ezimanyeneyo lelona candelo linamandla ngokwegunya kumbutho wezizwe ezimanyeneyo. Ibhunga lezokhuseleko lijongene nokugcina ucwangco nokhuseleko phakathi kwezizwe ngezizwe.
Naku okunye okungafundwaEdit
↑ "Members of the UNSC" United Nations retrieved 9 March 2014
Last edited on 4 EyoMdumba 2016, at 07:27
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-4 EyoMdumba 2016, kwi-07:27